Somaliland: Khilaafkii Xisbiga UCID Oo Mar Kale Dib U Bilaabmay Iyo Hadalada Ay Masuuliyiinta Xisbiga UCID Isdhaafsadeen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Khilaafkii Xisbiga UCID Oo Mar Kale Dib U Bilaabmay Iyo Hadalada...
Waxa markale dib usoo ifbaxay khilaaf xogan oo ka dhex taagnaa masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee UCID kaasi o muddo badaan soo jiitamayay.
Waxaana masuusliyiinta xisbiga UCID ay warbaahinta isku marinayeen maalmahanba hadalo layskugu jawaabayo, iyaga oo garabka aqoonyahan Jamaal Cali Xusen ay dhawaan dacwad ka dhan ah gudoomiye Faysal Cali Waraabe u gudbiyeen gudida diwaangalinta ururada siyaasada.
Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa isagu dhankisa ku adkaysanaya inay dacwadan macal u gudbiyaan maxkamada si loo kala saaro, halka gudoomiye Faysal uu diidan yahay in maxkamad la geeyo xisbiga taasin waxay sababtay inay hadalo xanaf leh ay warbaahinta iskumariyaan.
Dhanka kale gudoomiye Faysal ayaa mudooyinkii u danbeeyey xilalka ka qaadayay masuuliyiin sar sare oo ka mida xisbiga UCID taasi oo ay u danbaysay kadib markii uu habeen hore uu sheegay inuu xilkii ka qaaday xoghayahii golaha dhexe ee xisbiga UCID Xasan Cismaan Sabca isla markaaan aan ilaa hada la garanayn sababta kalfitay xilka kaaqadista masuuliyiinta.
Aqonyahan Jamaal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbiga UCID iyo xoghayaha golaha dhexe ee xisbiga UCID ayaa iyaguna shir jaraa’id oo ay qabteen waxay ku daadifeeyeen warsaxaafadeedka uu soo saray gudoomiye Faysal ee uu sheegay inuu xilkii kaga qaaday xoghayhihii golaha dhexe, iyaga oo dhanka kalena gudoomiye Faysal ugu baaqay inuu iscasilo ka hor intaan la gaadhin shirwaynaha golaha dhexe.
Waxana xoghayaha golaha dhexe ee xisbiga UCID uu ka dhawaajiyay inuu fashilin doono siro badan oo uu ka hayo gudoomiye Faysal.
Gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo isna khadka telefoonka lagula xidhiidhay ayaa waxa uu mark kale ka dhawaajiyay inaanu aqonyahan Jamaal Cali Xuseen ahay musharaxa u tartamaya jagada madaxwaynenimo ee xisbiga UCID balse ay shirwaynaha golaha dhexe kusoo dooran doonan.
Sidoo kalena waxa uu sheegay inaanay haba yaraate jirin wax cod sir oo uu ka hao xoghayaha golaha dhexe.
Hadaladan xanafta leh ee ay warbaahinta isku marinayaan masuuliyiinta xisbiga UCID ayaa waxay sababtay inuu maalinba maalinta ka danbaysa uu kor usii kaco khilaafka xoogan ee ka dhaxeeya masuuliyiinta xisbiga UCID iyada oo dhanka kalena la filayo inay dacwada ay garabka Jamaal Gudbiyeena ay socon doonto ilaa maxkamada. balse waxaaan ilaa hadana laga garanayn sababta ay gudida diiwaangalinta ururada siyaasada ee dacwada loo gudbiyay ay ilaa hada wax jawaaba looga hayn.
Somaliland: Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Oo Shir Kaga Qayb Galay Dalka Kenya